MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA EE SAINT PYRENEES IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Saint Pyrenees iyo Sawirro
Saint Bernard / Eyda Wadaagga ah ee loo yaqaan 'Pyrenees Great Mixed Sreed Dogs'
Harley the Saint Bernard / Great Pyrenees mix- ” 'Waxaan u tixraaceynaa Harley sidii' goos goos weyn oo dhogorta 'ah. Waxaan ka soo badbaadinay hoygii xoolaha ee deegaanka ee ku yaal New Hampshire halkaas oo hadda laga soo diray Indiana. Wuxuu jiray sanad markii aan helnay magaciisana wuxuu ahaa Moose. Qaybta xiisaha lihi waxay ahayd inuu soo qaatay magaciisa cusub. Ka dib markii aan helnay, waxaan go'aansanay 'Moose' inuusan ahayn magac ku habboon isaga. Intii aan wali guriga ku wadnay, waxaan tuurnay magacyo sida 'Apollo' iyo 'Hawkeye'. Markaan iri 'Harley', wuxuu bilaabay inuu dhuuxo wejigayga. Mar kale ayaan ku iri ka dib markii aan iska tuurnay magacyo kale oo isna wejigayga ayuu mar labaad urtay. Harley waxay ahayd welina waa jirtaa. Waxyaabaha uu ugu jecelyahay waa duugista caloosha iyo raacida baabuurta, gaar ahaan xaafadeena park eey . Wuxuu si wanaagsan ula dhaqmaa 3-dayada bisadaha , gaar ahaan Parker. Waxay jeceshahay inay isku xoqdo oo ay cagihiisa siiso qubeys, wax walbana wuu ku qaadaa tallaabo.
Saint Pyrenees ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Saint Bernard iyo Pyrenees weyn . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
IDRA = Diiwaanka Eyga ee Mareykanka, Inc.
'Kani waa Max, aniga Pyrenees-kayga. Hooyadiis waa Saint Bernard nadiif ah aabihiisna waa Pyrenees weyn oo saafi ah. Wuxuu leeyahay maaskaro iyo bar ku taal salka dabadiisa oo cabirkeedu yahay canab laakiin midkale markaa wuu wada cad yahay. Hooyadiis waa timo gaaban oo St. lehna wuxuu leeyahay laba cawro.
Ugu badnaan Eyga Saint Pyrenees
Ugu darso Saint Pyrenees sida eey ku dhow inay qubeystaan.
Ugu darso Saint Pyrenees sida eey markay jiraan 10 toddobaad
Eeg tusaalooyin badan oo Saint Pyrenees ah
Saint Pyrenees Sawirada 1
Liistada eeyaha waaweyn ee loo yaqaan 'Pyrenees Mix Mix' eeyaha
yeeyda 'arctic yeolf malamute' oo la isku iibinayo
6 wiig jir feeryahan ah
celcelis ahaan culeyska spaniel cocker